Maruva eimba nemaruva ebindu - Camellia | Art sens - mazano eimba nebindu
Maruva eimba nemaruva ebindu - Camellia
10.03.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Iro bindu, Maruva ebindu, Pfungwa Pamba, Zvirimwa, Maruva eimba
Camellia chimwe chezvinhu zvakanaka kwazvo zvinomera zvose zviri zviviri semaruva edzimba uye semaruva ebindu. Yakagadzirwa muChina neJapan kwemazana emakore zvisati zvave kuzivikanwa kune nyika dzekuMadokero, aya masango kana miti yakasvibirira inozivikanwa kubva kuHimalayas kuenda kuIndonesia. Ivo ndevemhuri yekwaTheaceae, ine pakati pe100 ne300 (maererano neruzivo rwekupokana) vamiriri, uye nhasi ivo vanozivikanwa pamusoro pemhando dze3000 uye ma hybrids, anonyanya kufarirwa iwo ari Camellia japonica ane mhando dzinodarika 2000. Izvi zvinoteverwa neCamellia reticulata nemhando dzakasiyana dze400 uye Camellia sasanqua ine pamusoro pe300. Inowanzonzi "Mambokadzi weChando Maruva," nekuda kwekutanga kwayo kutumbuka, camellia yakakoshawo mune zvehupfumi kumatunhu eindasitiri. Kubva tii, yekubika, yakakosha maoiri uye zvishongo zvidyarwa kusvika kumakemikari uye kemesi, izvo zvakanaka zveuyu ruva rakanyanya kunaka zvakawanda.
Iyo mavara anotangira kubva kuchena kusvika kune pinki kune yakadzika dzvuku, asi vamiriri veyero senge Camellia chrysantha vanowanikwawo munzvimbo dzekumaodzanyemba kweChina neVietnam. Nekuda kwekuparadzwa kwenzvimbo dzekugara, dzimwe mhando dzave dzisinganyanyi kuwanikwa uye dzichiisa munjodzi.
Camellia inokura kwazvo muvhu ine asidhi ine kunyorovera kwakanaka, inofarira kudziya kwakaderera uye unyoro hwakanaka. Maruva haakwanise kuiswa pasi pechimwe chinowanzoitika, nekuti chinosiyana zvichienderana nemhando uye mamiriro ekunze, izvo zvakanaka kana uchida kuva nemhando dzakasiyana siyana uye maruva anogara achiyerera. Kune mhando dzinobuda maruva padzinotanga kurara mamwe maruva, uye pane dzimwe dzinotumbuka pamberi pevamwe "kumuka", uye nguva yavo yekuita inogona kubva pamwedzi miviri kusvika kumatanhatu.
Kufanana nevamiriri vazhinji veiyi upamhi, camellia inoda unyoro - inodziya mamiriro ekunze, zvakanyanya inoda kudiridzwa. Nekuderera kwekupisa, kudiridza zvakare kunoderedzwa, zvichisiya ivhu kuti riome kunge 1-2 cm yakadzika, asi pasisina. Sezvatakataura, chirimwa ichi chinoda kudziya kwakadzika, asi nepo dzimwe mhando dzisisina matambudziko neaya echando anosvika kune -20 madhigirii, akaomesesa uye akafungisisa mafungidziro haafanire kubvumidzwa kuoma.
Kunyorova kwakanyanya kwakanakawo kune vamiririri vehando zhinji, uye kupfapfaidza kwakawanda kunofanirwa kudzivirira kutonhodza iwo mavara, ayo anozopfupisa hupenyu hwawo.
Direct sunlight haikurudzirwe kune vadiki zvirimwa, kazhinji sarudzo yakanakisa inodzivirirwa kubva kune yakasimba mafungu pane nzvimbo ine mumvuri mumvuri, asi aine nguva yakareba zvakakwana yekuvhenekera. Tembiricha dzakatenderedza uye pamusoro pechinguva chete 20 dhigirii inoshivirirwa neruva panguva yekugadzirwa kwebhurosi, asi sekureba kwazvinogona kutonhora kuri kudikanwa kwasara nguva yacho.
Kuuchika kazhinji hakufanirwe, asi kana camellia ichionekwa seruva reimba, saka kubva pakutanga kwaMay kusvika kupera kwaJuly inogona kunyatso kusungirwa kubva imwe kusvika mbiri pamwedzi nefetiraimendi yakaoma yemaruva eimba. Kubva muna Nyamavhuvhu, chero kuwedzerwa kwevhu kunovandudza hakuna kunaka.
Camellia inogona kutemwa uye kuumbwa. Nzira yakakurudzirwa yekusimudzira ndidzo kucheka, sezvo mbeu dzinganonoka kuyerera. Kana ichinge yakura pamba, zvinodikanwa kutapura 2-3 makore, sezvazvinoitwa mukutanga kwechando.
maruva ebindu, camellia yakura sei, camellia, maruva eimba, emukati maruva ari nyore kukura, camellia shrub, camellia ruva, maruva, maruva eimba anoyerera, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Mhuri: Mhuri yaGardenia J. Ellis inotumidzwa zita reAmerica ...
Kurongwa kwemaruva kweKisimusi
Yakarongedzeka maruva etafura yeKisimusi. Pfungwa shoma pane maitiro ekuita Kirisimasi ...
Ruva gadheni muhuku
Runako runokwezva rwezvinhu zvakasikwa harwugadzike uye kana uine muyadhi kana gadheni ...
Phalaenopsis Orchid - Sei kusarudza, Kusimudza uye Kutarisira?
Part4 - Chiedza uye kutapura Kutapurirana - Phalaenopsis inofanira kutapurwa ...
Ruva Ratidza - Pechersk Park, "Imba Yekuimba", Kiev pamwe nerwizi rweDnieper ...
Mamwe magadheni akanaka anokwanisa kunzi paradhiso uye mune anenge ese zviitiko ...